Mpamatsy dumpling sy ozinina - Mpanamboatra dumpling China
Ny dumpling dia karazan-tsakafo nentim-paharazana iray nisy tantara efa ela, ary ny fihinanana dumpling koa dia fomba nentim-paharazana manokana an'ny vahoaka sinoa mandritra ny Fetiben'ny Lohataona. Satria ny dikan'ny hoe "jiaozi rehefa antitra ianao", dia malaza eo amin'ny vahoaka izany. .Misy olona milaza fa "tsy misy dumpling dia tsara toy ny dumplings" .Ny Fetiben'ny lohataona rehetra dia nanjary sakafo matsiro ny dumpling, any amin'ny faritra maro any Shina, fomban'ny vahoaka ny hatory amin'ny alin'ny Taom-baovao ary hihinana. ..
Ranjam-boaloboka misy karazany maro, toy ny ronono mihinana ronono, bun ovy, bun Walnut, bun mamy (custard sy sôkôla), bun cartoon. Malaza indrindra eo amin'ny ankizy ny kitapo kardoneta. Ny fisehoana misy ny zava-misy dia mahatonga anao hanohitra ny fihinanana ary hampiboiboika ny vavanao .Ny vokatray dia nanondrana lehibe any Alemana, France, Sweden, Australia, Netherlands ary ny sisa. Manana karazan-vokatra lafarinina mangatsiaka maro izahay: toy ny Prawn Gyoza, Vegetable Gyoza (laisoa, chive ary famenoana hafa), dumpling Goldfish; Ny mpamokatra ...
Mangahazo / Hargow
Sakafo mahazatra eto an-toerana ao amin'ny faritanin'i Guangdong ny dumpling Shrimp, izay an'ny Kantonika nahandro sakafo sinoa valo lehibe, ary pastry kristaly tsara tarehy mifono nofon-kena sy legioma vitsivitsy. Ny vokatray dia nanondrana lehibe nankany Alemana, France, Sweden, Australia, Netherlands ary ny sisa. Manana karazan-vokatra lafarinina mangatsiaka maro izahay: toy ny Prawn Gyoza, Vegetable Gyoza (laisoa, chive ary famenoana hafa), dumpling Goldfish; Steamed Bun: ronono ...
Japoney dumpling / Gyoza
Gyoza miaraka amin'ny famenony matsiro, malefaka, volontsôkôlà, dia sakafo hariva malaza amin'ny herinandro any Japon ary antenaina ho mpamatsy sakafo ny sakafonao manaraka. Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?tit= Manana karazana vokatra lafarinina mangatsiaka maro izahay: Dumpling: toy ny Prawn Gyoza, Vegetable Gyoza (laisoa, chive ary famenoana hafa), dumpling Goldfish; Steamed Bun: ronono mihinana ronono, bun ovy, bun Walnut, swee ...